Kulan waynaha Wada Tashiga Xukuumada Iyo Shacabwaynaha DDSI. - Cakaara News
Kulan waynaha Wada Tashiga Xukuumada Iyo Shacabwaynaha DDSI.
Jigjiga(Cakaaranews ) Sabti, 20ka February, 2016, Waxaa wakhti xaadirkan si rasmiya uga furmay madasha shirarka ee xarunta madaxtooyada kulan waynaha wadatashiga xukuumada iyo shacabwaynaha DDSI ee Horumarka, Nabadgalayda, Maamulka suuban iyo la dagaalanka argagixisada.
kulan-waynahan ayaa Waxaa ka soo qaybgalay hogaaminta sare ee xukuumada DDSI, masuuliyiinta xukuumada heerarkeeda kaladuwan, masuuliyiinta maamulada gobolada, ergooyin kasocday 68da degmo iyo 4ta maamul magaalo oo isugu jira odayaal, hooyooyin iyo dhalinyaro, shaqaalaha xafiisyada heer deegaan oo ay kamid yihiin: agaasinada, xidhiidhiyayaasha, madax-kooxeedada, qurba joog, kooxaha fanka iyo suugaanta DDSI, iyo marti sharaf kale.
Madasha uu ka furmay kulan waynahani galabta ayaa ahayd Goob aad loo sii Qurxiyay oo gidaar walba ku dhegan yahay Halkudhegyo Muujinayay balanqaadyada Shacabka, XDSHSI iyo Xukuumadaba kuwaas oo Tilmaamayay Waxqabadka Wadajireed ee Xukuumada iyo shacabkeedu hiigsan doonaan sanadaha soo socda gaar ahaan jihooyinkii lagu hirgalin lahaa qorshaha GTP2 iyo waliba in dib loo eega waxqabadka laxaadka leh ee xukuumada sanadihii aan soo dhaafnay.
Haddaba furitaankii kulanwaynahan ayaa madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar uu Khudbad Dheelitiran oo hordhac u ah kulan-waynahan u soo jeediyay ergooyinka. Madaxweynaha ayaa ugu horayn uga mahadceliyay sida Xilkasnimada iyo wadaninimada leh ee ay Dhamaanba ergooyinku isugu taxalujiyeen ka soo Qaybgalka kulan waynahan. Wuxuuna madaxwaynuhu sheegay in la dagaalanka argagixisadu gundhig u tahay nabadgalyada iyo horumarka laxaadka leh ee ka hanan qaaday guud ahaanba deegaanka taasi oo ay xukuumada DDSI ay la tashiga shacabwaynaha ka dhigatay anjandaheeda 1aad ee lagu talaabsanayo.
Madaxwaynaha ayaa tibaaxay geedi socodka uu yeelan doono kulan waynahani isaga oo sheegay in uu socon doono mudo 4 maalmood ah sidii caadada ahaydna lagu soo bandhigi doono fikirada kaladuwan ee shacabwaynaha deegaanka si looga midho dhaliyo qorshayaasha horumarineed uu u dajisan xukuumada iyo shacabka gaar ahaan hirgalinta qorshaha koboca isbadalka dhaqaalaha GTP2 ee guud ahaan u dajisan dalka gaar ahaana DDSI.
Kulan waynaha oo hadda socda ayaa waxaa madasha shiraka si wayn u gilgilaya kooxaha fanka iyo suugaanka ee deegaanka oo ku soo bandhigaya dhaantooyin iyo heeso katurjimaya horumarka iyo sida ay shacabka iyo xukuumada DDSI iskugu duuban yihiin ee ay wax u wada qabsanayaan.
Isku soo wada Duuboo kulan waynahan ayaa socon doona mudo dhan afar maalmood taasi oo ay Shabakada Wararka ee CakaaraNews Sidaad uga barateen Saacad saacad halkuu marayo kulan waynahani idiin soo dhigi doona Afaafka Wararka ee ha ka fogaanina.